यौन जिज्ञासा-वीर्य स्खलनपछि यौनसम्पर्क गरे गर्भ रहन्छ र ? « Sajha Page
यौन जिज्ञासा-वीर्य स्खलनपछि यौनसम्पर्क गरे गर्भ रहन्छ र ?
कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौनसम्पर्कमै गर्भ रहन्छ, तर सधैं त्यस्तो हुँदैन । गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ । पहिलो कुरा त शुक्रकीट र डिम्बको मिलन हुनुपर्छ । शुक्रकीटसँग मिलन हुन डिम्ब निस्किएको समय हुनु जरुरी छ । महिलामा डिम्ब महिनाको एकपटक मात्र निष्कासन हुन्छ । डिम्ब निष्कासन हुने समयनजिक गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ ।
डिम्ब निस्किएको यस्तै १४ दिनमा महिनावारी सुरु हुन्छ । यस्तै २८ दिनको महिनावारी भएका महिलाको १४ औं दिनतिर डिम्ब निस्कने भएकाले उक्त समयमा यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ । डिम्ब निस्किएको यस्तै २४ देखि ४८ घण्टासम्म बाँच्छ भने शुक्रकीट महिलाको प्रजनन अङ्गभित्र ७२ घण्टा वा त्योभन्दा बढी बाँच्न सक्छ । त्यसैले डिम्ब निस्कने केही अघिको र केही दिनपछिको समयलाई गर्भधारण हुन सक्ने समय मानिन्छ, तर महिनावारी ठिक २८ दिनमा नभै ढिलो–चाँडो हुन्छ भने केही फरक पर्न सक्छ ।
यौनसम्पर्क राख्ने युवतीमा महिनावारी रोकिनुको मुख्य कारण गर्भ रहनु हो । तपाईंलाई थाहै होला, गर्भ रहेपछि महिलाको शरीरमा केही परिवर्तन आउँछन् । यो परिवर्तनको पहिचान गरेर गर्भ रहे/नरहेको छुट्टयाइन्छ । छोटकरीमा भन्ने हो भने महिनावारी नहुने, स्तन छाम्दा हल्का रूपमा दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, मनोदशामा परिवर्तन, थकाइ लागेजस्तो हुने, खाने बानी वा रुचिमा परिवर्तन तथा छिटोछिटो पिसाब लाग्ने हुन सक्छ । त्यसै गरी पछि स्तन अझै ठूलो हुने, स्तनको मुन्टो गाढा रंगको हुने, योनिबाट सेतो पानी बग्ने, पेट ठूलो हुनुका साथै बच्चा चलेजस्तो लक्षण देखिन्छ ।
यस्ता लक्षणमध्ये धेरैजसो लक्षण आफूमा भए गर्भ रहेको भन्न सकिने स्थिति हुन्छ, तैपनि कतिपय परिस्थिति शारीरिक जाँच गरेर मात्र गर्भ रहे/नरहेको (स्पष्ट रूपमा) निर्धारण गरिन्छ । यस्ता लक्षणका आधारमा आफैंले यी कुराको निक्र्यौल गर्न बढी समय पर्खनुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा तपाईंका लागि अहिले त्यति उपयुक्त नहोला ।